Naseho ny : 9 avrily 2022
Ny firafitry ny taolana dia ahitana : ilay taolana mafy, misy taola-malemy, misy ozatra mampifandray ary misy tsiranoka mampalefaka ny fifampikasohana amin'ny tonon-taolana. Ny "arthrose" dia fahasimban'ilay taola-malemy "cartilage", vokatry ny asa mafy na noho ny fahanterana na ihany koa faharatrana matetika. Ny faritra andairany matetika : soroka, maoja, lohalika, hatoka, tanana ary ny ankihibe. Ny salan-taona maro voakasiky ny aretina "arthrose" dia eo anelanelan'ny 35 hatramin'ny 50 taona, ny taola-malemy simba vokatr'ity aretina ity dia tsy miverina amin'ny endriny teo aloha intsony.
Fahasalaman'ny avokavoka : Branchiolite
Naseho ny : 2 avrily 2022
Ny "Branchiolite" dia aretina mpahazo ny avokavoka ary nirongatra be tao anatin'ny volana iray izay. Ny "branchiolite" dia aretin'ny taovam-pisefona mpahazo ny olona maro indrindra ny zaza latsaky ny telo taona. Ny fomba fiombony : fanafihan'ny tsimok'aretina ny fantsona na ny lalan-drivotra madinika hatao hoe " Branchiole", ka mivonto na tsentsina. Fomba fisehony : sahirana be rehefa miaina, tsentsina ny orina, mikohaka maina...
Naseho ny : 26 marsa 2022
Tamin'ny faha 21 marsa teo no fanamarihana ny andro maneran-tany ho fampahafantarana ny "trisomie-21" ka ny loha-hevitra tamin'izany dia ny hoe : Mahefa izahay. Ny hoe "izahay" eto dia : ny olona manana ny toe-batana "trisomie", ny fianankaviany ary ny fiaraha-monina. Ny "trisomie" dia tsy aretina, fa toe-batana, vokatry ny fitombon'ny isan'ny "chromosome n°21". Ny fambarana : malefaka ny hozatra, malemy ny tonon-taolana, misy fahatarana ny fiasan'ny saina...
Pejy 3 amin'ny 17